पद धारण गरेको ६० दिन भित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने नियम मन्त्री ज्युलाई किन लागु भएन ? « News24 : Premium News Channel
देशका उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवसहित ४ जना मन्त्रीले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको समाचार आएको छ । पद धारण गरेको ६० दिन भित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने नियम मन्त्री ज्युलाई किन लागु भएन ? त्यो थाहा छैन तर सम्पत्ती विवरण बुझाएरै पनि हुने त केही होइन रहेछ ।
आँखै अगाडि चिया खाएको पैसो समेत तिर्न नसक्नेहरुले करोडाँै करोडका मालिक कसरी बने । कसैले कमाएको सम्पत्तिबाट एक सुको चाहिएको होइन तर विना लगानी मालामाल हुने राजनीतिलाई किन फोहरी खेल भन्या होला ।